पूर्वेली भाकाको शिरैमा सिरबन्दी सार्वजनिक | Janaandolan
Home समाचार समाचार पूर्वेली भाकाको शिरैमा सिरबन्दी सार्वजनिक
पूर्वेली आधुनिक शैलीको दोहारी भाका ‘शिरैमा सिरबन्दी, नाकैमा बुलाकी’ सार्वजनिक भएको छ । फरक शैलीको यो गीत ‘आरएस इन्टरटेनमेन्ट’ युट्युव च्यानलमार्फत बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
रोवर्ड सिप्तुङ्खा राईको शब्द रचना रहेको गीतमा सुनिल राई र सुनिता थेगिमको आवाज रहेको छ । सुनिता पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका हुन् । यस भाकामा संगीत संयोजन गायक सुनिलले नै गरेका छन् ।
गीतकार रोवर्डले यस भाकामा ठेट नेपाली शब्दहरु प्रयोग गर्न खोजेका छन् । सोल्टी र सोल्टिनी भेट हुँदा गरिएका संवादहरुलाई उनले गीतमार्फत् उतार्ने जमर्को गरेका हुन् । गीतमा सोल्टीले सोल्टिनीलाई बिहेका लागि फकाएको बुझ्न सकिन्छ । फेरि भेट नहुन पनि सक्ने भएकाले आजै जाऔँ भन्ने सोल्टीको प्रस्ताव हन्छ ।
गीत यस्तो छ ः
सोल्टीः शीरैमा शीरबन्दी, नाकैमा बुलाकी
जाऔँ न आजै सोल्टिनी, भेट फेरि नहोला कि !
सोल्टिनीः शीरैमा ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी
हुन्न आज सोल्टी हजुर, भेट फेरि होला नि ।
काठमाडौँस्थित ए–वन स्टुडियोमा राजेस श्रेष्ठले गीत रेकर्ड गरेका हुन् । किशोर थापाले गीतलाई मिक्सिङ गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोका लागि भने इशक जवेगुले क्यामेरामा साथ दिएका छन् । म्यूजिक भिडियो काठमाडौँमा छायांकन गरिएको हो । यस शैलीको गीतमा पहिलो पटक गिटारको समेत प्रयोग गरिएको छ ।
सञ्जीव सुब्बाले गिटार, सञ्जीव मैनालीले बाँसुरी र शान्तिबहादुर रायामाझीले मादलमा साथ दिएका छन् । लोकनाथ पौडेलको प्राविधिक सहयोग रहेको गीतको निर्माता सुशीला लिम्बू हुन् ।
यस गीतका गायक तथा संगीतकार सुनिल पछिल्लो समय निकै व्यस्त छन् । सुनिलले हालसम्म ७० वटाभन्दा बढीमा गीतमा संगीत संयोजन गरिसकेका छन् । झापा बाहुनडाँगीका बासिन्दा उनी पूर्वका परिचित संगीतकार हुन् ।
युएईमा रहेका गीतकार रोवर्डको भने यो सातौँ गीत हो । यसअघिका उनका छ वटै गीत चर्चित छन् । आफूले पहिलोपटक युगल गीत लेखेको रोवर्ड बताउँछन् । गीतमा पूर्वेली संस्कृति झल्काउने भरपूर प्रयास गरिएको छ ।
रोवर्ड युएईमा बसेर पनि आफ्नो देशका लागि गीत लेख्न तल्लीन छन् । इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–४ स्थित पेल्टिमारीका बासिन्दा उनी सन् २००५ बाट युएईमा श्रम गरिरहेका छन् । रोवर्डले लेखेका गीतहरु प्रमोद खरेल, मेलिना राई, श्रेया राई लगायत चर्चित गायक गायिकाले पनि गाएका छन् ।
उनले लेखेका गीतका शब्दहरु आकर्षक र मिठा छन् । पीडा र बेदनाका गीत लेखनमा उनी बढी दख्खल राख्छन् । आफूले रहरै रहरमा यो क्षेत्रमा पाइला चालेको रोवर्ड बताउँछन् । यसपटक ‘शीरैमा शीरबन्दी’ बोलको गीतमा भने आफूहरुले नयाँपन दिन खोजेको रोवर्डको भनाइ छ ।
Previous articleबुद्धशान्ति आज राति १२ बजेदेखि भदौ ४ गतेसम्म लकडाउन
Next articleसिटौलाको प्रश्न सरकार कम्युनिष्टका लागि मात्रै कि नेपाली जनताका लागि ?
समाचार समाचार पूर्वेली भाकाको शिरैमा सिरबन्दी सार्वजनिक